‘भ्यालेनटाइ डे’ सप्ताह : आज ‘प्रपोज डे’, कसरी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मनको कुरा ?
‘भ्यालेनटाइ डे’ सप्ताह : आज ‘प्रपोज डे’, कसरी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मनको कुरा ? ‘भ्यालेनटाइ डे’ सप्ताह : आज ‘प्रपोज डे’, कसरी व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मनको कुरा ?
प्रकाशित मिति: माघ 25, 2076
सिरहा,माघ २५ गते ।
‘प्रेम आँखाबाट शुरु हुन्छ र मनमा पुगेर टुगिन्छ ।’ प्रेम आँखाले गर्ने कि मनले ? निसन्देह मनले । तर, यसको सुरुवात आँखाबाट हुन्छ । जब एक अर्कालाई देखिन्छ, मन पराइन्छ, आकर्षित भइन्छ, भेटिन्छ, वात मारिन्छ । तब मनमा प्रेम अंकुराउँछ । जब त्यो मनमा पुग्छ, आँखा बन्द हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ ।
भनिन्छ, प्रेम स्वत हुने कुरा हो । तर, कुनै न कुनै रुपमा प्रेम व्यक्त हुनुपर्छ । प्रेम पोखिनुपर्छ । प्रेम पग्लिनुपर्छ । तब न प्रेम हुन्छ । एउटा अंग्रेजी भनाई छ, ‘वेल बिगन इज हाफ डन’ अर्थात कुनै कामको सुरुवात यदि राम्रो ढंगले हुन्छ भने, सम्झनुहोस् आधा बाजी जित्नुभयो । प्रेमको सन्दर्भमा पनि त यो लागु हुन्छ । प्रेमको सुरुवात प्रपोज अर्थात प्रस्तावबाट शुरु हुन्छ । तर, प्रस्ताव राख्ने भन्दैमा सोझै ‘आइ लभ यु’ भन्न सुहाउँछ त ?
आज ‘भ्यालेनटाइन डे’ को दोस्रो दिन आर्थत ‘प्रपोज डे’ । हुन त भ्यालेन्टाइन सप्ताह शुरु भइसकेको छ । हिजो ७ फेब्रुअरदेखि १४ फेब्रुअरीसम्म चल्ने भ्यालेनटाइन सप्ताहको पहिलो दिन ‘रोज डे’ थियो भने आज प्रेमी जोडीहरुका लागि ‘प्रपोज डे’ अर्थात प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिन ।
अतः प्रेमी वा प्रेमिकालाई कसरी प्रस्ताव राख्ने त ? यहाँ सुझाइएको छ ।
प्रेम व्यक्त गर्ने माध्याम हो, उपहार । यस्तो उपहार छनौट गरौं, जसमा आफ्नो प्रेम व्यक्त होस् । उपहारको छनौट गर्दा यो पनि ख्याल गरौं कि, उनको रुची के छ रु के मन पराउँछ रु
अहिले प्रेम प्रस्ताव राख्ने विधी र तौर तरिकामा पनि फरकपन आएको छ । प्रेम व्यक्त गर्नका लागि मोवाइल वा सामाजिक संजालको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के भने, यस्ता माध्यामहरु त्यती प्रभावकारी हुँदैन, जति भौतिक उपस्थितीमा हुने गर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के पनि भने, फेसबुक वा यस्तो भर्चुअल माध्यामबाट प्रेम प्रस्ताव राख्दा शिष्ट शैली अपनाउनुपर्छ ।
प्रेम प्रस्ताव त्यसबेला मात्र राख्नुपर्छ, जब आफुले मन पराएको व्यक्तिको भावना सकारात्मक छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ । अन्यथा त्यसको साइट इफेक्ट पर्न सक्छ ।
प्रेम प्रस्ताव राख्नुअघि आफ्नो केटा र केटी साथीको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ । यदि प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरिदियो भने आफुमा आघात पर्न सक्छ ।
प्रेम प्रस्ताव राख्नुअघि, उनको मन जित्ने प्रयास गरौं । जबसम्म सम्पूर्ण रुपमा केटा र केटी साथीलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सकिदैन, तबसम्म प्रेम प्रस्ताव राख्नु व्यर्थ हुनसक्छ ।